के तपाइको ओठको सुन्दरता हराएको छ ? त्यसो भए यी उपाय अपनाउनुहोस् ! - News Portal in Nepali
वि.सं १० कार्तिक २०७८, बुधबार
के तपाइको ओठको सुन्दरता हराएको छ ? त्यसो भए यी उपाय अपनाउनुहोस् !
स्टिम न्युज वि.सं २८ पुष २०७६, सोमबार १२:२८
हाम्रो शररिको महत्वपुर्ण अंग भनेको ओठ हो । ओठ राम्रो भयो भने हरेक मानिस सुन्दर देखिन्छ । उमेर ले वा अन्य विभिद कारणले गर्दा ओठको रँग बदलिने हुन्छ ।अनियमित खानपानले धुम्रपानको असरले गर्दा पनि यसको रङ बदलिने गर्दछ । प्रत्येक मानिसहरुले आफनो ओठ सुन्दर राख्न प्राक्रतिक रङ फर्काउन विभिन्न कस्मेटिक सामग्री प्रयोग गर्छन् । तर, केही त्यस्ता उपाय पनि छन्, जसले तपाईंको प्राकृतिक चमकलाई ओठमा फर्काउन सक्छ ।
ओठ कालो हुने कारण हरेक छन । कफीको अत्यधिक सेवनले समस्या निम्याउन सक्छ । राति सुत्नुअघि मेकअप हटाउने गर्नुहुन्न भने पनि यसले तपाईंको ओठको रङ बदलेको हुन सक्छ ।
प्रदूषण तथा घामको विकिरणका कारण पनि ओठ कालो हुन सक्छ । सुत्नु अघि कागतीलाई निचोरेर ओठमा लगाउनुपर्छ । एक दुई महिना सम्म यो नियमित गर्नुपर्छ ।
यसले तपाईंको ओठको पुराना काम नलाग्ने कोषलाई ताजा र चम्किलो बनाइदिन्छ । कालो ओठलाई गुलाबी बनाउन चुकन्दर पनि सहयोगी हुन्छ । सुत्नुअघि चुकन्दर लगाउने र बिहान सफा गर्नुपर्छ । चुकन्दरको रातो रङले ओठलाई गुलाबी बनाइदिन्छ । ओठमा घिउकुमारीको प्रयोग गर्दा पनि चमक बिस्तारै फर्कन सक्छ । त्यसैले यिनि बिधि प्रयोग गर्दा ओठ लाई मुलायन र सुन्दर गराउन मद्धत गर्छ ।
ईरानकी एकमात्र महिला ओलम्पिक पदक विजेताले गरिन् देश छोड्ने फैसला
श्रीमान खोज्दै काठमाडौंबाट इटहरी पुगेकी महिलामाथी सामुहिक बलात्कार
खाली पेटमा भुलेर पनि नखानुहोस् यी सात खाना
वि.सं ३ चैत्र २०७७, मंगलवार ०८:३०
निलो प्रकाश दिने चश्मा निद्राका लागि फाइदाजनक
वि.सं ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार १५:१७
प्रणय सप्ताहः कसरी राख्ने प्रेम प्रस्ताव ?
वि.सं २५ माघ २०७६, शनिबार १३:४८